Ikhasi elisemthethweni: Megapolis
Amazwana ku Megapolis
Megapolis software ehlobene
I-Minecraft – umdlalo wesandbox onomhlaba wama-cubic ovulekile, okokuqala uvula amathuba angapheli wokuveza ubuhlakani bakho futhi uthuthukise amakhono okudala.
Umdlalo Arcade ukuvikela indlu ka umdlali ngokumelene ukuhlasela izilwane crazy. Umdlalo ine izindlela eziningi ukuvikela indlu ngokumelene nezilwane enezici ezihlukene kanye namakhono.
I-Castle TD – isu le-arcade ngesitayela se-Tower Defense. Emidlalweni kunezinhlobonhlobo ezinkulu zemibhoshongo nezilo ezinencazelo eningiliziwe yokwakha isivikelo esisebenza kahle kunazo zonke.
Isicelo olusemthethweni esitolo digital kusukela inkonzo ethandwa Ubisoft. In the isofthiwe kukhona ezihlukahlukene enkulu imidlalo okuyizinto kufinyeleleke thwebula.
Umdlalo Ekwenza Umlingiswa lapho ungakwazi ukucinga bese ukubamba Pokemon emigwaqweni yasemadolobheni ngokusebenzisa ikhamera ye Smartphones. Umdlalo ine ikhono lokukhulumisana futhi ancintisane nabanye abadlali.
Isofthiwe ukubuka, ukwakha kanye ukukhipha yokugcina izinhlobo ezahlukene. Futhi isofthiwe isebenza izicelo third-party ukuvula amafayela ahlukahlukene kanye amaphepha.